XOG: Farmaajo oo hal Beel u go’aamiyay tartanka Kursiga madaxweynaha Hirshabeelle + (Ujeedka) | Somalia News
Culimada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saartay gefkii Emmanuel Macron
Culimada Soomaaliyeed ayaa si weyn caro uga muujiyay hadalka madaxweyanaha Faransiiska, Emmanuel Macron, kaddib dhacdadii lagu dilay macalinkii u dhashay dalkaas oo ardeydiisa tusay sawir gacmeed uu sheegay inuu ka sameeyay Nebi Muxamed NNKH. Hey’adda culimada Soomaaliyeed oo kulan ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dhaleeceyn u jeedisay madaxweynaha Faransiiska. “Culimada soomaaliyeed iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ilaalinta diinta Islaamka iyo danaha Muslimiinta, waxay dhaleecenayaan hadalka iyo mowqifka madaxweynaha Faransiiska,” ayuu yiri Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hey’adda culimada Soomaaliyeed oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay shirka. Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Soomow oo ah afhayeenka hey’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in Macron ‘uu dhaawac u geystay diinta Islaamka, isla markaana dagaalka toos ah ku qaadayo Muslimiinta.’ “Wuxuu go’aansaday in dagaal toos ah ku qaado diinta Islaamka iyo dadkeeda, Nebiga N.N.K.H.H in sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan cad oo lagu qaaday diinta Islaamka, waa duullaan lagu qaaday dhammaan Islaamka” ayuu yiri Sheekh Soomow. Sheekh Soomow ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhaweynayaan go’aanka qaar ka mid ah dalalka Carabta ay ka soo saareen arrintan. “Dalalka diiday waxyaabaha uu soo saaro Faransiiska waan u hambalyeyneynaa.” Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in “dacaayadaha cunsurinimada iyo Islaam naceybka ah ay adeegsadaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer galbeedka, si ay u xoojiyaan danahooda siyaasadeed.” “Khaladaadka ay galayaan cunsuriyiinta reer galbeedka ayaa hadda noqday dacaayad olole siyaasadeed ah. Macron waxyaabaha hadda ugu waaweyn ee u kalifay difaaca taasaa waxaa ka mid ah in Islaamka ceydiisa lagu galo olole siyaasadeed, wax shaqeyn karana ma ahan,” ayuu hadalkiisa ku sii daray. Guud ahaan shucuubta dunida Islaamka ayaa aad uga carootay hadalka Macron, waxayna dalalka Islaamku joojiyeen badeecadihii uga imaan jiray Faransiiska, iyadoo ciqaab looga dhigayo gefka uu diinta suuban ee Islaamka u geystay madaxweynahooda. Meelo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Burco ee Somaliland waxaa shalay ka dhacay banaanbaxyo looga soo hor jeedo gefka uu Faransiisku kula kacay Nebi Muxamad NNKH. Dhanka kale waxaa lagu wadaa in Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya ay maanta ka dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah gefka madaxweynaha Faransiiska Emanuel Macron.
XOG: Farmaajo oo hal Beel u go’aamiyay tartanka Kursiga madaxweynaha Hirshabeelle + (Ujeedka)
Sideed ka mid ah Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doorto gobalka Hiiraan, islamarkaana ka soo jeeda Beesha Xawaadle ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana la sheegayaa in kulankaas uu ku dhamaaday natiijo la’aan.
Xildhibaanadaan oo Madaxweynaha kulanka ka dalbaday ayaa sidoo kale waxaa la socday ugaas-ka beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif iyo mas’uuliyiin kale.
Warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa sheegaya in Xildhibaanadan ay Madaxweynaha ka dalbadeen in kursiga Madaxweynaha HirShabeelle uusan tartan geli karin, oo uu u gaar yahay beesha ay matalaan ee Xawaadle.
Xogaha aan helnay ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu u sheegay Xildhibaanada in kursiga doorashada Madaxweynaha uu yahay tartan u furan guud ahaan shacabka iyo beelaha HirShabeelle oo aysan jirin beel gaar u leh ama saami u leh.
“Madaxweynaha waxa uu yiri waa tartan furan kursiga Madaxweynaha, waana diiday is fahamkii hore loo gaaray mana ahan wax socon kara,” ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan xubnihii shirka ka qeyb galay.
“Sidoo kale Madaxweynaha waxaan u sheegnay in doorashada ay boob ku socoto waana ka meer meeray balse waxaa yeelan doonnaa kulan kale beel ahaan waxaana go’aano ka gaari doonaa wixii nala gudboon,” ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan xubnihii kulankaas ka qeyb-galay oo hadlay.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda doodo ku saabsan sidii laga yeeli lahaa doorashada HirShabeelle iyo tabashooyin ay qabaan beelaha qaar. Guddiga Farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad HirShabeelle ayaa dhinaca kale wata shaqooyinkooda caadiga ah inkastoo ay wajahayaan dhibaatooyin badan oo dhanka beelaha ah.
Next articleEthiopia Reports 866 New COVID19 Cases
Hay’ad Caalami ah oo cambaareysay dil shalay ka dhacay Muqdisho
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin LINE Hay’adda UNICEF ee qaramada midoobey ayaa canbaareysay weerar lagu dilay labo ka mid ah shaqaalaha talaalka cudurka dabeysha kaasi oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.War qoraal ah oo uu soo saaray madaxa UNICEF ee soomaaliya Jesper Moller ayaa lagu sheegay in UNICEF ay argaxgaxday falka lagu dilay labo xubnood oo ka mid ah shaqaalaha talaalka kuwaasi oo shaqo ku jiray. “Shaqaalahan geesiyiinta waxay naftooda halis u galiyeen in adeega caafimaadka oo ay aadka ugu baahanyihiin gaarsiiyaan carruurta nugul” ayaa lagu yiri qoraalka. UNICEF waxay tacsi u dirtay qoyska iyo ehelka ay ka baxeen shaqaalaha gargaarka ee la dilay. Qoraalka waxaa lagu sheegay in UNICEF ay si xoog leh u canbaareyneyso weerarka fuleynimada leh ee lagu dilay shaqaalaha waxayna ka codsatay dowlada soomaaliya baarintaan buuxa. Weerarada ka dhanka ah shaqaalaha gargaarka waxay xad gudub ku yihiin sharciyada caalamiga. Dabley hubeysan ayaa ku toogatay deegaan ka tirsan degmada Kaxda labo ruux oo mid ka mid ah ay ahayd dumar kuwaasoo ku jirey howlaha tallaalka cudurka dabaysha oo ka socda gobolo ka mid ah koofurta iyo bartamaha Soomaaliya. Facebook Twitter WhatsApp Linkedin LINE Previous articleThe US early vote exceeds 70 million and continues historical pace Next articleXildhibaanada Baarlamaanka 2aad ee Hirshabelle oo saaka la dhaarinayo